I-lg v20 inyukela uku-oda kwangaphambili kwi-t ngo-Okthobha 7
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo I-LG V20 inyukela uku-oda kwangaphambili kwi-AT & T ngo-Okthobha u-7
I-LG V20 inyukela uku-oda kwangaphambili kwi-AT & T ngo-Okthobha u-7
I-T-Mobile sele ibhengeze ukuba izakuqala ukuthengisa i-LG V20 , Ihlabathi kunye neapos; i-smartphone yokuqala yokuhambisa nge-Android 7.0 Nougat ebhodini. Namhlanje, omnye umphathi osekwe e-US uqinisekisile ukuba uya kubonelela nge-V20 kwiivenkile zayo ezikwi-Intanethi nakwiintanethi.
I-AT & T ibhengeze ii-odolo zangaphambili ze-LG V20 ziya kuvulwa ngo-Okthobha u-7 kwiwebhusayithi ephetheyo kunye nakwiivenkile zezitena nodaka. Isithembiso sokuqala esinomdla esabhengezwa yi-AT & T sijolise kwi-DIRECTV kunye ne-Uverse TV abathengi abangena kumgca wenkonzo omtsha, njengoko kufanelekile ukuba bafumane ukuya kuthi ga kwi-695 yeedola kwiikhredithi zenyanga xa bethenga i-V20 kwi-AT & T elandelayo okanye kwi-AT & T kunyaka olandelayo .
Ukongeza, abathengi banokuthenga i-LG V20 kwi-AT & T elandelayo kwaye bafumane i-LG G Pad X 10.1 ye- $ 0.99 ngesivumelwano seminyaka emibini. Okokugqibela kodwa kungaphelelanga apho, abalandeli be-Android banokufumana i-LG & apos ye-flagship ye-smartphone kwi-AT & T Elandelayo nge- $ 27.67 ngenyanga ngeenyanga ezingama-30 okanye nge-AT & T elandelayo Nyaka ngamnye kwi- $ 34.59 ngenyanga ngeenyanga ezingama-24 ngeenkonzo ezifanelekileyo.
Ngaphandle kwento yokuba iza ne-Android 7.0 Nougat kanye ngaphandle kwebhokisi, i-LG V20 sisixhobo esinamandla enkosi kwiprosesa ye-quad-core Qualcomm Snapdragon 820 kunye ne-4GB ye-RAM.
I-smartphone ibonelela ngendawo yokugcina (32GB / 64GB), kodwa ukuba loo & apos ayinelanga ungongeza ukuya kwi-256GB ngekhadi le-MicroSD. Enye into enomdla malunga ne-LG V20 ngumboniso we-5.7-intshi we-QHD oxhasa isisombululo se-pixel ye-1440 x 2560, ehamba nesekondari, encinci, encinci ye-2.1-intshi ngesisombululo se-pixel esingu-160 x 1040.
I-LG V20 inekhamera ezimbini ngaphambili nangeekhamera ezimbini ezijonge ngasemva, kubandakanya i-16-megapixel ye-lens engile ene-laser kunye nesigaba sokufumanisa i-autofocus, kunye ne-OIS (ukuzinza komfanekiso ozinzileyo) kunye nokukhanya okubini kwe-LED, kunye I-8-megapixel 135 yedigri ebanzi yeelensi ezibamba ubuhle bendawo ngakumbi kunelensi esemgangathweni.
Kukwafanelekile ukuba uqaphele ukuba i-LG V20 iza nesuti epheleleyo ye Iinkonzo ze-AT & T , kubandakanya i-HD Voice, iWall Calling, iMiyalezo ePhambili, i-AT & T yeVidiyo yokufowuna kunye nenkxaso yenethiwekhi ye-LTE-Advanced.
Isamsung s8 vs oneplus 5t
Java cima ifayile ukuba ikhona
I-Kik yinkqubo yemiyalezo eneebots ezikunika iividiyo ezihlekisayo kunye neengcebiso zesitayile
Imowudi yokuqhuba yomncedisi kaGoogle ihamba kancinci kumazwe amaninzi
Ngaba i-Galaxy S9 inokulinganisa uxinzelelo lwegazi? Sibeka isivamvo sayo sombala esitsha kuvavanyo ...
Igadi eyimfihlo: ungazifihla njani ii -apps kwi-iPhone yakho
Oku kunokuba ngamaxabiso okugqibela e-US e-Samsung & apos; s uthotho lwe-S20
Eyona Ntengiso kaMongameli kunye ne-apos; yokuthengisa: nazi ezona zivumelwano zibalaseleyo